Otu esi ahọrọ isi ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Otu esi ahọrọ isi ịsa ahụ
Ihe mbụ mgbe ị rụchara otu ụbọchị ọrụ wee laghachi n'ụlọ bụ ịsa ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Ka ihu igwe na-ekpo ọkụ, ịsa ahụ edochila ịsa ahụ, nke na-adị ngwa ngwa ma dị mfe karị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịsa ahụ nke ọma, oghere ịsa ahụ dị ezigbo mkpa, ma ị chọghị iji mmiri na-asọ asọ na mberede ịsa ahụ, ọ bụ ihe a na-atụghị anya ya. Ihe na-esonụ bụ mmalite nke nhọrọ nke usoro ịhọrọ nozzle ịsa ahụ.
1. Lee anyammiri mmiri ịsa ahụspool
Ogo nkespool ga-emetụta ahụmahụ na ndụ ọrụ nke mmiri mmiri ịsa ahụ ozugbo. Ya mere, mgbe ịzụrụ ammiri mmiri ịsa ahụ, ị ga-aṅa ntị iji lelee àgwà ya. N'otu oge ahụ, ezigbospool nwekwara ike ịchekwa mmiri. Ọrụ nke.
2. Lelee mkpuchi elu
Ogo nke mkpuchi nkemmiri mmiri ịsa ahụọ bụghị naanị na-emetụta àgwà na ndụ ọrụ ozugbo, kamakwa ọ na-emetụta ihicha nke ịdị ọcha na-emebu. Plastic mkpuchi mkpuchi dị ọnụ ala, mana ha nwere obere ndụ ọrụ ma nwee ike igbochi ọnụ ọnụ, nke na-eweta nnukwu nsogbu na nhicha nke mbụ. Igwe anaghị agba nchara na ọla kọpa ka mma.
3. Hụ mmetụta nke mmiri na ịgba
Site n'èzí, ọdịdị nke nozzle ọ bụla yiri ka ọ bụ otu, n'ihi ya, ị kwesịrị ị na-ele anya na ya mmiri ntinye usoro na ịgba mmetụta mgbe ị na-ahọrọ, na họrọ nozzle kwesịrị ekwesị dị ka gị na-asa ahụ àgwà, ka ị nweta mmetụta nke ịsa ahụ dị mma. .
4. Lelee ihe nke mmiri mmiri ịsa ahụ
A na-ejikarị rọba, igwe anaghị agba nchara na ọla kọpa mee nozzles ịsa ahụ. N'ikwu okwu n'otu n'otu, ọ bụ ezie na nozzles ịsa ahụ plastik dị ọnụ ala, ha nwere ọtụtụ adịghị ike. Ha anaghị adịte aka, na-enwekarị mgbawa, ọ dịkwa mfe ịkwakọba nje bacteria na unyi. Ha ekwekọghị n'ụdị ndụ ndị ọgbara ọhụrụ na nchụso ahụike na ịdị ọcha. Igwe anaghị agba nchara na ọla kọpanozzles ịsa ahụyiri nke ahụ, mana ọ dịtụ n'ikwu okwu, nozzles igwe anaghị agba nchara dị ọnụ ala karịa, ebe sọks ịsa ahụ ọla kọpa na-ewu ewu na ikuku.
Nke gara aga:Otu esi edozi isi mmiri ịsa ahụ na-agbapụta
Osote:Kedu ka esi zere corrosion nke igwe anaghị agba nchara igwe ịsa ahụ?